बलात्कार विरुद्धको प्रर्दशन (सम्पादकीय)
देशमा दैनिक रुपमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भैरहेको छ । बलात्कारजन्य अपराधले प्रशय पाईरहँदा स–साना बच्चादेखि जेष्ठ नागरिकसम्म यसको चपेटामा परेको छ । समाजले बलात्कारजन्य जघन्य अपराधलाई लुकाउने कोसिस गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा यस्ता घटनामा संलग्न हुनेको मनोबल उच्च रहने र दोहोर्याएर यस्ता कुकृत कार्यमा संलग्न हुने गरेको छ ।
देशको कानुनले बलात्कारजन्य अपराध प्रमाणित भएमा कानुनी सजायको प्रावधान गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिताले बलात्कारजन्य फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा सजायको प्रावधान गरेपनि अझैं रोकिन सकेको छैन् । बलात्कारजन्य अपराध कसरी रोक्न सकिन्छ ? कानून सजायको प्रावधानले मात्र यो सम्भव छ ? हुन्त विश्वमा बलात्कारजन्य अपराधमा संलग्नलाई सजायका विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमै मृत्युदण्डसम्मको सजाय छ । हाम्रोमा के गरिनुपर्छ ?
बलात्कारजन्य अपराध वढेको वढैछ । यसलाई कानूनी पाटोबाट रोक्न एक प्रयास जारी छ । तर त्यसले मात्र पुग्दैन् । गाउँ समाजमा बलात्कारजन्य घटना लुकाउन रुपैयाँको मोलमलाई हुन्छ । पंचायत गरिन्छ र त्यसमै पीडितलाई जबरजस्ती मिलाउने प्रयत्न हुन्छ । यो गम्भीर अपराध हो । बलात्कारजन्य अपराधकर्मलाई संलग्नलाई समाजले बहिस्कार गर्नुपर्छ । आफ्नो होस् या पराय बलात्कारजन्य घटनामा संलग्नको पक्षपोषण गर्नु भएन् । यसमा समाजिक उत्तरदायित्वको अत्यन्त खाँचो छ ।
सिरहामा युवाहरुले बलात्कार विरुद्ध प्लेकाड सहित प्रर्दशन गरेको छ । कालो टि–शर्ट, टाउँकोमा कालोपट्टी बाँधेर गरेको प्रर्दशन स्पष्ट संकेत हो । यसलाई समाजका प्रत्येक अंगले बुझ्नु पर्छ । नारीलाई असुरक्षित बनाउने कुनैपनि कार्यलाई बन्देज लगाउनु जरुरी छ । युवाहरुको राज्य र समाजलाई देखाउन खोजेको संकेतलाई बुझ्नुपर्छ । र बलात्कारजन्य गम्भीर अपराधमुक्त समाजको परिकल्पनालाई यर्थातमा देखाउनुपर्छ ।